Onye isi obodo threattali na-eyi egwu iziga ọkụ na-ere ọkụ iji lụ ọgụ coronavirus: Martin Vrijland
Kedu ihe bụ ihu ọma nke ọchịchị na-agbasa site na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mgbasa ozi na njikọ ya na-achịkwa mmegide? Rịba ama akara egwurugwu. Egwurugwu ahụ ọ̀ bụ ihe nnọchianya nke ụwa ọhụrụ ahụ n'usoro? Iju mmiri ozuzo ụwa jupụtara na ụwa dị ka n'oge Noa? Nso afiak ọtọn̄ọ ke Ukwọ ama ekebe? Ngwurugwu?
"Anyị na-ezipụ ndị na-enwu ọkụ!" Onye isi obodo Italy a tiri mkpu.
Ugbu a, anyị ka na-eche na anyị ekwesịghị iwere nke a n'ụzọ nkịtị, mana ọ bụrụ na nke a ga-eme n'ụzọ nkịtị? Lelee asụsụ na-eyi egwu na-esite n’onu onye isi obodo a. Minista Grapperhous ọ ga - ebido ime ihe banyere coronavirus dịka 'enweghị nchịkwa' yana 'ọ na - apụ n'aka' site na mgbasa ozi? "N'ihi na ị naghị ege ntị ma ghara ịbanye n'ime!"
Ị na-echeta ịdọ aka na ntị a site na Nọvemba 2019?
N'akwụkwọ m na n'ọtụtụ isiokwu (nke a na-agụ n'efu) ebe a na saịtị m kọwara na egwurugwu bụ akara nke Chineke nke usoro ụwa ọhụrụ: lucifa. Orderwa ọhụụ na-agbasi mbọ ike maka ụwa n'ọdịdị nke Lucifa. Ihe nnọchianya nke Lucifa bu Baphomet: hermaphrodite (androgynous ma ọ bụ 'na-anọpụ iche na nwoke na nwanyị') chimera buck (gụọ lee ụfọdụ chimerism bụ).
Akwụsịrị m ya wee sị, 'Lee, nke a abụghị ihe nkiri. Are bụghị Will Smith na Abụ m Legend. Laa n'ụlọ. ”
Nke a bụ mkpokọta mmelite nke Matali Mayors tụfuru ya na ndị mmadụ na-emebi # Covid19 kwarantaini. Ee, ndepụta okwu ziri ezi. pic.twitter.com/60V4Csuonb
Vincenzo De Luca, Onye isi obodo nke obodo obodo Campania
Akwụkwọ site na 2016 The Anya nke Ọchịchịrị nke Dean Koontz na-ekwu banyere bioweapon virus Wuhan-400
Trump, Q-Anon na 'nhicha akụkọ ifo dị omimi' (Robert Jensen, Janet Ossebaard)
Mmelite mkpọchi Coronavirus covid-19: Mgbe iteta n'ụra wee mata na ọnye gị dị, gịnị ka ị ga - eme?
Tags: onyeisi obodo, coronavirus, de, agba, Italiaanse, Italy, Luca, chebe, eke na egwurugwu, mmiri ozuzo, na, Vincenzo, ndị na-enwu ọkụ
Oge anyị nọ ugbu a? Nkeji 3:17 na vidiyo
Echere m na mbụ na 3:30 elekere mgbe mmadụ na-achọ ịta ahụhụ na otu n'ime ihe ngosi Corvid.
Kpee egwuregwu vidio ụfọdụ, ka otu n'ime ndị na-ahụ maka iwu kwuru.
ụfọdụ ndị gụrụ akwụkwọ, gụnyere WHO, na-ekwu ugbu a na ọmarịcha 'ọgba aghara n'ezie' na-apụta ebe “egwuregwu” niile na-etolite ma mekwa ka ọ dịkwuo mma, ebe ndị mmadụ nọ n'ime ụlọ ebe a na-amanye ma ọ bụ ndị a na-akpọ 'afọ ofufo' iche gaa mebere ụwa nwere ike ịkwaga nke na-agaghị apụtacha site na ihe n'ezie. Ọbụnadị ụmụaka nwere ike iji usoro izi ihe nye ụmụaka ihe nke ga - eme ya, na ọdịnihu ha agaghịzi enwe ụlọ akwụkwọ kama ha ga - abụrịrị "ụlọ klas" ebe ha ga - esi nweta ụmụaka ndị ọzọ site n'aka onye nkuzi na - akụzi n'ezie, na ihe na - abụghị ezigbo ya. pụrụ iche.
A na-ekwu na a na-atụ anya na ọdịnihu dị nso ndị mmadụ nwere ike ịnọpụ iche maka na nje na-aga n'ihu, mana n'eziokwu na nke a abụghị nsogbu ma ọlị na ndị mmadụ agaghị achọ ịpụ apụ n'ihi na ụwa ụwa mepere emepe ha nwere ike izute mgbe niile enweghị ike ịkọwa ihe n'ezie.
Yabụ na a na-akwalite transhumanism nke ukwuu site na ihe ndị a na-akpọ mkpọchi nzuzo na ịnọrọ onwe ha, n'oge na-adịghị anya, ga-adịwanye ọhụụ na nke ukwuu.
A na-akụzikwara ụmụaka obere ka esi eso ala bea. Dochie anụrị ndị ahụ na 'ihe na-eyi egwu' ma gịnị ka ị hụrụ na ngwa ahụ?
Ndị ọrụ nọọsụ na ndị nwere ọrụ dị mkpa ndị nwere oyi nwere ike ịrụ ọrụ naanị.
Ọtụtụ ụlọ ezumike nka na Netherlands nwere mkpọchi koodu mkpọchi na mpụga nke ụfọdụ ọnụ ụzọ. N'ọnọdụ ahụ, onye nke okenye enweghị ike imeghe ọnụ ụzọ n'ime ya. Nke ahụ bụ teknụzụ ọgbara ọhụrụ. Ọ bụrụ na a na-enyo enyo coronavirus, ọnụ ụzọ nwere ike imechi ya. A na-enwekarị crematorium dị nso n’ebe a na-elekọta ndị agadi. E kwuwerị, ọ na-abụkarị ọdụ ọdụ ikpeazụ. Canmụaka enweghị ike ịga leta. Mkpọchi. Ọ dabara nke ọma, ha nwere ike ịdabere na nlekọta dị mma. Ndị ọrụ nọọsụ na-agbaso ụkpụrụ ahụ nke ọma ma nwee ike idobe ndị agadi bu nje n'ọnụ ụlọ ha .. ma ọ bụrụ na ị ga - enweru ihe ọ bụla nke ibute ọrịa (ị ga - ahapụ iche) ma ọ bụ na ndị agadi ndị ọzọ bu ọrịa ... ị chọghị nke ahụ. Thatdị nke na-alọghachi n'ụlọ nyocha ụlọ mgbe ụfọdụ na-ekwu “coronavirus positive”. Ọ bụ ihe na-ewute na ikpuchi onye agadi dị otú ahụ, mana ee .. ”Ọ ga-abụrịrị na ọ bụghị ihe ọchị, mana onye nwere ike ịgbagha nsonaazụ ụlọ nyocha ahụ? Stick na-araparana na ntanetị… ”
Kedụ ka Harry Mens ga-adị?
Ọ dị mma, Vincenzo de Luca. Enwere kwa. Ha nọkwa n'ọnọdụ ndị dị mkpa n'intali. Ha na-ahazi ihe na mba ụwa. Ha na-ahụ ihe niile, Ha na-ekpebi ihe ọ bụla, Ha bụ ihe a na-ahụkarị, Ha bụ ndị ọkachamara, Ha bụ ndị pịa, Ha bụ ogwe aka siri ike, wdg. Anyị nọ n'ụzọ nkịtị ọchịchị nke Ha na-achị. Kedụ ka anyị, ndị nkịtị, si ewepu Ha?
Humanbụ mmadụ dere, sị:
Nke mbu, aga m achọ ikele gị maka ọtụtụ ederede na-akọ banyere ọtụtụ afọ. Iji kwado ọrụ gị, mana maka ọdịnaya nke akwụkwọ ahụ, enye m iwu ya. Enwere m olile anya na mmadụ nile nọ n ’ụwa nwere ike ile n’enyo lee ihe ọ na-eme anya ma na-echekwa ihe ndụ bụ.
Achọrọ m ka onye ọ bụla nwee ume, amamihe na ahụike niile n'oge ọgba aghara a.
Nnwale maka nje Corona bụ adịgboroja!
Naanị otu ihe dị mkpa site na njikọ site na jhonny jikọtara.
CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Oge RT-PCR Diagnostic Panel bụ ezigbo nnwale RT-PCR bu n’obi maka ịchọpụta nzere nke nucleic acid site na 2019-nCoV na nyocha iku ume elu na nke ala (dịka nasopharyngeal ma ọ bụ oropharyngeal swabs, sputum, obere akụkụ okuku ume na aspirates, bronchoalveolar lavage, na nasopharyngeal wash / aspirate ma ọ bụ imi aspirate) anakọtara site na ndị mmadụ na-ezute 2019-nCoV clinical na / ma ọ bụ njikwa ọrịa (dịka ọmụmaatụ, akara akara na mgbaàmà metụtara 2019- oria nCoV, ịkpọtụrụ onye nwere ike ime ma ọ bụ nwapụta 2019-nCoV, akụkọ banyere njem gaa mpaghara ala ebe a hụrụ ikpe 2019-nCoV, ma ọ bụ njikọ nje ndị ọzọ maka ule 2019-nCoV nwere ike igosipụta dị ka akụkụ nke nyocha ahụike ọha). Nnwale na United States ka amachibidoro na laborat laboratrated nke gosipụtara n’okpuru mmezi mmezi ụlọ nyocha nke 1988 (CLIA), 42 USC § 263a, iji mee nnwale siri ike dị elu.
Nsonaazụ bụ maka njirimara nke 2019-nCoV RNA. NCoV RNA nke 2019 na-ahụkarị mkpanaka elu na nke ala n’oge iku ume. Nsonaazụ dị mma bụ ihe na-egosi na ọ bụ oria na-emetụta 2019-nCoV mana anaghị egbochi ọrịa nje ma ọ bụ ibute ọrịa na nje ọzọ. Onye ọka iwu ahụ chọpụtara nwere ike ọ gaghị abụ ihe kpatara ọrịa. Ratlọ nyocha dị n'ime United States na ókèala ya kwesịrị ịkọsara ndị ọrụ ahụike ọhaneze dabara ọkwa ọma.
Nsonaazụ ojoo anaghị egbochi ọrịa 2019-nCoV ọrịa, ekwesighi iji ya dịka ntọala maka ọgwụgwọ ma ọ bụ mkpebi nlekọta ndị ọzọ. A ga-ejikọ nsonaazụ na-eleba anya na nyocha ụlọ ọgwụ, akụkọ gbasara ndị ọrịa, yana ozi ọrịa.
Anyị eriteghị uru na nnwale nke nje. Kedu otu esi eme atụmatụ atụmatụ ọgwụgwọ yana ọgwụ ndị a na-eji? Protocol? Ọ dị ka ịnwale ndị ọrịa site na ndị dọkịta ma hụ ma ọgwụgwọ dị mma. Ajụjụ a bụ na ndị ọrịa anaghị arịa ọrịa n'ihi nke a. Ghọta na ndị dọkịta na ndị nọọsụ anaghị eyikarị mkpuchi ọ bụla ma nwee ike ibunye ọrịa / ọrịa na ndị ọrịa corona. Ma oge ụfọdụ na-arụ ọrụ mgbe ha onwe ha nwere ikike corona. Ndi ọrịa a ga - emecha nwụọ n'ihi akpịrị na ihe ọzọ? Cui bono? Kpamkpam, ndị injinia mmekọrịta ụwa na-akawanye mma.
@ martin Na mgbakwunye na (usoro nke) akara dị na ozi ahụ, alsoaakwa ntị na mmegharị ahụ / ọdịdị ihu ndị isi ndị a ma ọ bụ ndị nwere nsogbu
Na enweghị obi na akọ na uche, a na-egosipụta ezi ebumnuche na ihu
Ọzọkwa ọkacha mara ihe obi juputara na…
Obi Luciferian na egosiputa onwe ya na anya / ihu ya na ahu ya.
N'ihi ịdị adị nke “ntụpọ kpuru ìsì” n'echiche anyị, anyị na-eche (anyị na-adaba maka aro) na ikike enyi bụ enyi mmadụ / obi. Ezigbo uru ihu bara uru.
Anyi erutela mgbe ndi mmadu (persona = nkpuchi) gosiputa ezi ihu ha.
Njikọ a na-enye nduzi miri emi na ihe atụ. Nweta ihu ọma site na nsụhọ.
Na sidenote: AI bụ echiche dị oke mkpa ma ọ bụ kama ọ bụ nnomi nke ikike mmadụ. Kọmputa agaghị adị mkpa (h) ịghọta eziokwu. Mana ọ bụrụhaala na mmadụ niile enwetabeghị ụdị onye ọ bụ, ọ ga na-arịọ ya maka ikike ya.
Gordon Brown kpọrọ oku ka gọọmentị mba ụwa gboo ọgụ coronavirus
-Zọ PM na etiti ụlọ akụ nchekwa 2008 na-egosi ike ọrụ nke ndị isi na ndị ọkachamara ahụike
Ee, usoro nke ndị a na-enyo enyo na-abịakarị na njedebe
" Trump, Q-Anon na 'nhicha akụkọ ifo dị omimi' (Robert Jensen, Janet Ossebaard)
Nwoke ndi nwoke bu nwoke ndi nwoke? Ihe ndabere sayensi »
Nleta nile: 1.338.963
Martin Vrijland op 'Ndapu nke cabal' ihe nzuzu na ndi bu 'Q Anon' Inoffizieller Mitarbeiter (IMB'ers)?
Faek Nousbaster op Coronavirus: ebee ka nje oria si bia, oleekwa otu ha si amụba ma na-agagharị?